Mpanamboatra sy mpamatsy rohy Fuse - Sina Fuse Links Factory
Ny singa miendrika fiampitana miovaova vita amin'ny metaly madio voaisy tombo-kase amin'ny cartridge vita amin'ny vera vita amin'ny seramika na epoxy. Fantsona fuse feno fasika quartz fahadiovana voadinika simika toy ny mpanelanelana amin'ny arc. Ny teboka matevina amin'ny singa fuse dia mifarana amin'ny satroka manome antoka ny fifandraisana elektrika azo itokisana; Ny mpikapoka dia mety ampifandraisina amin'ny rohy fijanonana mba hanomezana haingana ny micro-switch hanome famantarana isan-karazany na hanapaka ny circuit mandeha ho azy. Fuse manokana araky ny sary 1.2 ~ 1.4 dia azo omena arakaraka ny takian'ny mpanjifa.
Sombin-tsipika miampita miovaova vita amin'ny metaly madio voaisy tombo-kase amin'ny cartridge vita amin'ny vera epoxy mahatohitra hafanana. Fantsona fuse feno fasika quartz fahadiovana voadinika simika toy ny mpanelanelana amin'ny arc. Ny dot-welding ny singa an'ny fuse dia mifarana amin'ny fifandraisana antsy manome antoka ny fifandraisana elektrika azo antoka.
Sombin-kazo miampanga miovaova vita amin'ny varahina na volafotsy madio voaisy tombo-kase amin'ny cartridge vita amin'ny seramika avo lenta, fantsona Fuse feno fasika quartz fahadiovana voadinika simika toy ny mpanelanelana amin'ny arc. Ny teboka matevina amin'ny singa fuse dia mijanona amin'ny terminal izay miantoka ny fifandraisana elektrika azo antoka ary mamorona fifandraisana amin'ny antsy karazana antsy. Ny tondro na ny mpikapoka dia mety ampidirina amin'ny rohy fiuse mba hampisehoana ny fanapahana fuse na hanome famantarana isan-karazany ary hanapaka ny faritra mandeha ho azy.
Fifandraisan-doha amin'ny tavoahangy Cylindrical ho an'ny isa misy hatramin'ny 60A, ary fifandraisana antsy ho an'ny ankehitriny voatanisa hatramin'ny 600A, singa fuse cross-section miovaova vita avy amin'ny firaka zinc. Ny mpampiasa dia afaka manolo ny singa an'ny fuse may ary mampiasa ny fiuse indray.